Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo Amray in la baneeyo garoonka Jeenyo – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaGudoomiyaha gobolka Banaadir oo Amray in la baneeyo garoonka Jeenyo
Hiiraan Xog, Jun 14, 2018:- Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) ayaa maanta amray in garoonkii Jeenyo lagu banneeyo muddo 3 cisho ah si garoonka loogu soo celiyo sidii uu ahaan jirey oo dhalinyarada ugu noqdo goob Isboorti.
“Madaxweynaha dowlada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmajo) ayaa horey u amray inaan dhulalka dawladda la bixin karin, sidaas daraadeed looma dul-qaadan doonno in shaqsiyaad dano gaar ah uga faa’iideystaan dhulalkii danta guud ee dawladda. Waxaan u sheegeynaa shaqsiyaadkaas inay si sharaf leh ku soo celiyaan dhulalkaas, si dan guud loogu adeego. Ciddii awaamiirtan ka hor-timaadana waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. “Ayuu yiri Duqa Muqdisho.
AKHRISO:- Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo magacaabay Guddiga Qaran